Halatra omby Tena misy ireo zandary tratra nifandray tendro tamin’ny dahalo
Vono olona matetika tany Andapa Tsy mahazo mivoaka ny trano ny ankizy rehefa folakandro
Tsy mahazo mivoaka ny trano intsony ny zaza tsy ampy taona rehetra manomboka amin’ny 02 ora folakandro any amin’ny distrikan’Andapa.
Tena misy ireo zandary mifandray tendro amin’ireo dahalo mpangalatr’omby, hoy ny sekretera jeneraly miadidy ny zandarimariam-pirenena omaly.
Iray no tratra tany amin’ny distrikan’Ambositra ary efa nampidirina am-ponja. Rehefa tratra ilay dahalo dia nosavaina ny findainy ka hita tao fa nisy zandary niantso izy nanoro ny lalan’ireo zandary namany hafa mpanara-dia sy ireo fokonolona tompon’ny omby nisy nangalatra. Tsy maintsy handraisana fepetra ny toy ireny. Nanatanteraka fifampiarahabana nahatratra ny taona vaovao 2019 ny teo anivon’ny zandarimariam-pirenena omaly teny amin’ny toby Ratsimandrava, fotoana nanaovan’izy ireo tombana ny zava-nisy sy nitranga tamin’iny taona nivalona 2018 iny ihany koa. Nambaran’ny sekretera jeneraly miadidy ny zandarimariam-pirenena fa nahatratra 19 ireo zandary am-perinasa matin’ny dahalo tamin’iny taona 2018 iny. Nomarihiny kosa fa nihena ny trangana fitsaram-bahoaka. Raha nahatratra 70 tamin’ny taona 2017 dia nihena ho 38 tamin’ny taona 2018. Ho an’ny fanakanan-dalana ataon’ny dahalo indray dia nahatratra 60 isa ireo voasambotra tamin’ity taona 2018 ity raha 35 tamin’ny taona 2017.